प्रदेश १ मा ४५० क्वारेन्टाइन र ९० शय्याको आइसोलेसन तयार तर चिकित्सकीय सामग्री अभाव
कोभिड १९ नियन्त्रण प्रयास प्रदेश १ मा ४५० क्वारेन्टाइन र ९० शय्याको आइसोलेसन तयार तर चिकित्सकीय सामग्री अभाव
बाह्रखरी - कुमार लुइँटेल बिहिबार, चैत १३, २०७६
विराटनगर । प्रदेश १ मा चार सय ५० क्वारेन्टाइन र ९० शय्याको आइसोलेसन शय्या तयार भएका छन् ।
मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिका ५ को टाँडीमा २ सय बेडको क्वारेन्टाइन तयार भएको छ । प्रदेश सरकारको आर्थिक सहयोगमा सेनाले टाँडीको जंगल क्षेत्रमा आइसोलेसन बेड तयार पारेको हो । प्रदेश सरकारको निर्णयअनुसार सेनाले पहिलो चरणमा टाँडीस्थित यसअघि जनमुक्ति सेनाको क्याम्प रहेको स्थानमा २ सय बेडको अस्थायी क्वारेन्टाइन निर्माण गरेको हो । सेनाले सय वटा टेन्ट राखेर २ सय बेडको क्वारेन्टाइन बनाएको छ ।
मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको टाँडीस्थित सेनाको सूर्यदल गणको परिसरभित्र क्वारेन्टाइन तयार गरिएको हो । करिब ४ बिघामा क्वारेन्टाइनस्थल निर्माण गरिएको हो । पालभित्र २–२ जना अट्ने बेड राखिएको छ । यसको दूरी ५ मिटरको फरकमा रहेको सेनाको २ नम्बर बाहिनी अड्डाले जनाएको छ ।
सेनाले २५ ट्वाइलेट, बाथरुमसमेत रहेको क्वारेन्टाइनसँगै झापाको कल्वलगढी भद्ररस्थित ग्रामीण कृषि परीक्षण तालिम केन्द्र ४० बेड र उदयपुरको बेलस्रोतमा २ सय बेडको क्वारेन्टाइन पनि निर्माण गरेको छ । यसैगरी कोसी अञ्चल, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, नोबेल मेडिकल कलेज, विराट मेडिकल कलेजसहित विभिन्न अस्पतालमा आइसोलेसन शय्या तयार गरिएको छ ।
क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन शय्या तयार भए पनि पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्युपमेन्ट (पीपीई) को भने प्रदेशभरि नै अभाव देखिएको छ । केही अघिसम्म प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा रहेको दुई सयवटा यस्ता पोसाकसहितका सामग्री अस्पतालहरूलाई वितरण भइसकेको सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले जनाएका छन् । थप जोहो गर्ने प्रयास भइरहेको घिमिरेको भनाइ छ ।
यस्ता सामग्रीको जाहो हुन सकेको छ । व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरणहरू बिरामी ओसार्ने एम्बुलेन्स चालकले समेत प्रयोग गर्नुपर्नेमा उनीहरूले मास्ककै भरमा बिरामी ओसारिरहेको कोसी अञ्चल अस्पतालकी मेसु डा. संगीता मिश्रले बताएकी छन् । भनिन्, “हाम्रो अस्पतालमा पनि यस्ता सामग्रीको अभाव छ ।” एम्बुलेन्स नै निर्मलीकरण गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने भए पनि सबै सहज रूपमा हुन सकेको छैन ।
चिकित्सकका अनुसार प्रदेश १ मा स्वाब लिने किट र यसको परीक्षण यहीं हुने प्रबन्ध पनि छैन । काठमाडौमै पठाउनुपर्छ । कोसी अस्पतालमा हाल आठवटा टाइप एक र टाइप २ का १५ उपकरण छन् । नर्स अञ्जु खनालले कपडाको मास्क लगाएर काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको गुनासो गर्दै भनिन्, “हामी स्वास्थ्यकर्मीकै स्वास्थ्य पनि जोखिममा छ । आवश्यक सामग्रीको प्रबन्ध हुनुपर्छ ।” आइसोलेसन वार्डमा काम गर्दा अझ त्रासको सामना गर्नुपरेको उनको भनाइ छ ।
कोसी अस्पतालमा अहिले धेरै बिरामी ज्वरोको समस्या लिएर आएका आउने गरेका छन । आइसोलेसन वार्ड सञ्चालनमा आएको छ । मेसु संगीता मिश्रका अनुसार एक दिनमा एक कम्तीमा बाह्रवटासम्म विशेष किसिमको केही सानो संख्यामा मौज्दात रहेको जनाएका छन् । पीपीई जगेडा गर्ने । दिनमा कम्तीमा बाह्रवटा चाहिन्छ । जिल्ला जिल्लामा बाडिंएको छ । यस्ता सामग्रीको जोहो हुन नसकेको मिश्रले बताइन् ।
कोरोना डिसइन्फेक्सन स्प्रे गर्न सुरु
विराटनगर महानगरपालिकाले नगर क्षेत्रमा कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्न निर्मलीकरण अभियान सुरु गरेको छ ।
संक्रमण फैलन नदिन औषधि छर्केर निर्मलीकरणको प्रयास थालनी गरिएको विराटनगर महानगरपालिका प्रमुख भीम पराजुलीले बताएका छन् । उनले भने, “पहिलो चरणमा अस्पतालमा निर्मलीकरणमा अलि बढी ध्यान दिएर स्प्रे गरिरहेका छौं ।” उनले महानगरको ल्याबमा आफ्नै जनशक्ति प्रयोग गरी बनाइएको डिसइन्फेक्सन स्प्रे छर्कन थालेको सुनाए ।
सोडिएम हाइपो क्लोराइड लगायत विभिन्न रसायनबाट बनाइएको स्प्रे पहिलो चरणमा कोसी अस्पतालमा छर्कने काम सम्पन्न भएको छ । यसबाट संक्रमण रोक्न मद्दत मिल्ने बताइएको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) को मापदण्डमा रही महानगरले आफ्नै ल्याबबाट डिस इन्फेक्सन स्प्रे बनाएको र आवश्यक परे थप जनशक्तिसहित नगरको स्वास्थ्य सुरक्षामा जुट्ने पराजुलीले बताएका छन् । विराटनगर महानगरको कार्यालय र विराटनगर स्थित वडा १९ मा रहेको जनस्वास्थ्य कार्यालयमा पनि स्प्रे गरिएको छ ।
बिहिबार, चैत १३, २०७६ मा प्रकाशित
बहिनीको साहसले खुल्यो ‘न्यायको ढोका’
निजीलाई यातायात ट्रायल गर्न नदिन निर्देशन
इटहरीमा धुलोको सास्ती ! (७ तस्बिर)